तिज विशेष २०७८, जवाफ जस्ताको तस्तै…. - bampijhyala.com
Home > दाेलखा समाचार > तिज विशेष २०७८, जवाफ जस्ताको तस्तै….
तिज विशेष २०७८, जवाफ जस्ताको तस्तै….
२४ भाद्र २०७८, बिहीबार १८:३० bampijhyala
हजुरले यो तीजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? तीज भनेको जातीय विशेषमा हेर्नु उचित हो या अनुचित तपाईंको बिचारमा के हो ? र तीज पर्व एकल महिलाले मान्नु ठिक होइन भन्ने धारणा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
सकुना श्रेष्ठ, अध्यक्ष समकालिन एकता समाज नेपाल
धार्मिक दृ्ष्टिकोणले पार्वतीले महादेव पति पाउनकोलागि निराहार तपस्या बसेको हिसाबले हेरिए पनि नेपाली नारीहरुको लागि लामो समयपछि आफ्नो माइती घरमा गएर जन्मदाता आमाबाबु, साथीसंगी भेटघाट गरेर मनको भारी बिसाएर केही क्षण भएपनि रमाइलो गरेर खुशी मनाउने रुपमा हेरेकी छु ।
यसै गरी तीज भनेको यो जात र उ जात, उपल्लो जात र तल्लो जात भनेर हेर्नुहुन्न । जात भनेको स्त्रीजाति र पुरुषजाति मात्रै लिङ्गको आधारमा विभाजन गरिएको हो । आ–आफ्नो स्वेच्छाले जसले मनाउँदा नि हुन्छ । धर्म र संस्कृति सबैको आ–आफ्नै तरिकाको हुन्छ, तर पनि रमाइलो मनोरञ्जन जुनसुकै जातिले मनाउँछन् र मनाउनबाट कसैलाई वञ्चित गराउनु हुन्न ।
तीज पर्व एकल महिला विधवाले मनाउनु हुन्न भन्ने पुरानो परम्परा ठीक होइन । उनीहरुलाई त झन् उत्साहित बनाउनु पर्छ । जन्मपछि मृत्य निश्चित छ अनि बितेका कुरासंगै मन डुलाउन थालेपछि उनीहरु बेसाहारा जस्तै बन्नपुग्छ । जुनसुकै कारणले विछोड भएपनि सपना सम्झेर भुलिदिनु पर्छ । अनी आउने जीवनलाई सकृय र सार्थक बनाउनको लागि उत्प्रेरणा दिलाउनुपर्छ ।
रिना चाकुबजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, छिजि द्वाल्खा डोबर
मैले चाहिँ तीज साँस्कृतिक परम्पराको रुपमा हेर्छु । यस चाडलाई देखासेखी र गर गहनाको प्रद्र्धशन गरेर स्वाङ पारेर आडम्वाको रुपमा मनाउनु हुर्दैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा रहेको छ । खासै भन्नु पर्दा यो तीज पर्व परम्परागत हिसाबले हेर्दा ब्राह्मण क्षेत्री जातिले मान्ने विशेष पर्व हो । अब लोकतान्त्रिक पद्धतिको यो चरणमा आएर सबै जातिलाई सामुदायिक रुपमा हेर्ने भएकोले सबै धर्म संस्कृति सबैले मान्न थाले चाडपर्वको आ–आफ्नै मौलिकता हुन्छ । त्यसलाई बुझेर मान्दा राम्रो होला भन्ने लाग्छ ।
यसै गरी जहाँसम्म एकल महिलाको प्रसङ्ग छ । ती कुरालाई सामाजिक रुपमा हेर्ने नजर अर्कै होला, धार्मिक दृष्टिले बेग्लै होला तर एकल महिला अथवा विधवा नारीले यो तीज पर्व मनाउन हुन्छकि हुन्न भन्ने प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा आफ्नो परम्परालाई आत्मसात् गर्नेकी नगर्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन सक्नु प¥र्यौ ।
कलावती श्रेष्ठ, अध्यक्ष द्वाल्खा म्यास्मुचा खलक
यो तीजलाई परम्परागत पर्वको रुपमा हेर्छु । किनकि सम्पूर्ण हिन्दुहरुको सामुहिक पर्व हो । यो पर्व ज–जसले मान्छन् ती सबैको साझा पर्व हो । कुन जात र कुन वर्ग भनेर कतै खुलाईएको छैन । र धार्मिक ग्रन्थमा पनि यही जातले मात्रै मान्ने हो भनेर किटानसाथ भनिएको पनी छैन । त्यसैले पुर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मका भक्तजन र शुभेच्छुक जो कोहीले मान्न सक्नु हुन्छ । हुनत नेवारहरुको आ–आफ्नो पुरानो रीतिरिवाज छ । कसैले मान्लान् कसैले नमान्लान् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।, तर यो पर्वले धेरै समय सम्म भेटघाट नभएको साथीसंगी नाता सबै संग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेकोले जातित्वको रुपमा हेरिनु हुन्न । त्यसै गरी एकल महिलाको हकमा चाहिँ उनीहरुलाई समावेश नै गर्नु हुन्न भन्ने कुरामा म सहमत छुइन । उनीहरुको पनि मन हुन्छ । सँधै भरि परम्परा भनेर गुम्साएर खुम्च्याएर राख्नु हुन्न । जन्म पछी मृत्यु निश्चित यो कहिले कसरी भन्ने कुरामा मात्र फरक हुन्छ । त्यसैले समय र परिस्थिती अनुसार एकल महिलालाई पनी चाडपर्व मनाउन लगाउन उत्प्रेरित गर्नु पर्छ ।
कल्पना श्रेष्ठ महर्जन, अनेमसं केन्द्रीय सदस्य / समाजसेवी
मैले हेर्दा तीज एक परम्परा हो । परम्परागत रीतिरिवाज हो, यसलाई सामान्य रुपमा नै मनाउन उचित लाग्छ, समय र परिस्थिति हेरेर तडकभडक नगरीकन मनाउनु उचित होला । अर्को कुरा तीजमा टाढा रहेका चेलीबेटीलाई आफन्त साथीसंगीलाई नजिक बनाउने माध्यमको रुपमा हुर्नु पर्छ । तीजलाई जातीय विशेषमा हेर्नु हुन्न । यो आफ्नो स्वेच्छाचारी विचारमा भरपर्ने कुरा हो । कसैले कसैलाई दबाबमा राखेर मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।
तीज परम्परागत चाड भएको कारणले पुराना रुढीवादी बिचार हुनेहरुको सोचमा एकल वा विधवा महिलाहरुले धर्म कर्ममा अग्रसर हुनुहुन्न भन्ने होला, । तर समयको परिवर्तन संगै हरेक कुरा परिवर्तन भएर गएको छ । त्यसैले उचित शिक्षा हासिल गर्नेहरुको दृष्टिकोणमा यो उचित होइन । एकल महिलाहरुलाई झन् उत्साहित र जागरुक बनाएर यस्तो बेलामा अगाडि ल्याएर प्रोत्साहन दिनु राम्रो हुनेछ ।
सविना मानन्धर, व्यवसायी–समाजसेवी
मेरो बिचारमा तिज महिलाहरुले मान्ने पर्व मध्ये विशेष एक पर्व हो । पहिले पहिले नेपाली दिदीबहीनीहरुमा पनी विशेषतः बाम्हन, क्षेत्री जातिमा यो चाडपर्व मान्ने परम्परा रही आएको थियो । तर जव नेपालमा राजनिती परिवर्तन लगायत हरेक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन स–सँगै सामाजिक परम्परा र संस्कारमा पनी परिवर्तन भयो । त्यसैले यसलाई जटिल तवरले भन्दा पनी सजिलो र सुलभ तरिकाले मनाउने तर्फ उन्मुख हुनु पर्छ । जुन कुराले आफु र आफ्नो नातागोता, परिवार विचको सम्वन्धलाई गाढा बनाउन सहयोग गरोस् ।
अहिले आएर तिज पर्व सम्पूर्ण नेपाली महिला दिदिबहीनीहरुको विशेष पर्वको रुपमा विकास भएर मनाउने गरेको पाईन्छ । यसलाई फेसनको रुपमा भन्दापनी वास्तवित चाडको रुपमा मनाउँदा बेस हुन्छ । खास गरी तिज पर्व आफ्नो परिवारको उज्वल भविष्य र सु–स्वास्थ्य अनी दिर्घायुको कामनाको लागि दिदिबहिनीहरुले ब्रत लिएर मान्ने चलन रहेको छ ।
त्यसै गरी एक्कल महिलाले तिज मान्नु हुन्छ हुदैन भन्दा पनी यसको महत्व र परम्परालाई हेर्दा झन एक्कल महिलाको प्रबद्र्धन एक्लोपन हटाउनको लागि तिज लगायत हरेक धार्मीक, परम्परागत कार्यहरुमा संलग्न हुँदा बेस हुन्छ । यसले एक्लोपनलाई टाढा रहेको महशुष गर्न मद्धत गर्छ र सामाजिक सहयोग समेत प्राप्त हुन्छ जसले जिउने आधारलाई अझ थप मद्धत गर्नुका साथै सहयोग पू¥याउँछ ।
मेनुका सुवेदी, विद्यार्थी राम्पा दोलखा
तिज नेपाली दिदिबहीनीहरुले मनाउने चाडपर्व मध्येको एक परम्परागत संस्कृति हो । ईच्छा अनुसार मान्न पाउँनु पर्छ नकी कसैले मान्दिन भन्न पनि पाउछ । मान्छु भन्न पनि पाउछ । यसै गरी नेपाली महिला दिदिबहीनी जो कोही पनि ढिलो चाडो विधवा हुन्छ नै त्यसैले बिधवा नारीले पनि तिज तथा हरेक धर्म संस्कृति अनुसार व्रत तिर्थ गर्नु उनिहरुको ईच्छा हो । यदी कसैले मनाउनु पाउँछ पाउँदैन भन्नु बेकार हो, उनीहरुको स्वेच्छा हो, अधिकारको कुरा होईन ।
अष्ट कुमारी श्रेष्ठ, गृहिणी
हाम्रो संस्कृति र परम्परागत पर्वको रुपमा हेर्छु । जुनसुकै जातिले मनाए पनि फरक पर्दैन, यो जात र उ जातले मनाउँछन् भन्ने छैन, धर्म र संस्कृतिमा जातकै कुरा उठाउनु ठिक लाग्दैन ।
यसै गरी एकल पुरुषले नारीको अभावमा जे जस्तो गरेपनि मौन हुने हाम्रो समाजमा एकल महिलालाई जुनसुकै कुरामा भेदभाव गर्नु भनेको महिला माथि अवहेलना गरेको लाग्छ । उनीहरुको पनि स्वेच्छाले जिउने अधिकार हुन्छ नि होइन र ? त्यसैले उनीहरुको ईच्छा आकाक्षालाई बुझेर सहमत जनाउनु उचित हुन्छ ।
रिमा साइराम, अध्यक्ष रिसा सेवा समाज
तीजलाई संस्कृति र परम्परागत पर्वको रुपमा हेर्छु । माईतीघर सम्झिने यादगार समयको हिसाबले बा–आमा, दिदीबहिनी र बाल्य साथीहरु भेटघाट गरेर खुशी साट्ने क्षणक हिसाबले हेर्छु । यसै गरी तीजलाई जातीय धर्मले कहिले पनि हेर्नुहुन्न । यदि यो तीज पर्वलाई बाहुन क्षेत्रीहरुको मात्रै हो भनियो भने हाम्रो मिश्रित समाजमा घुलमिल गरेर एकताबद्ध हुनुको के औचित्य रह्यो र ! पर्व जसरी सामुहिक रुपमा मनाइन्छ । त्यसै गरी मनोरञ्जन पनि सामुहिक रुपमा गर्दा एकताको डोरी बलियो हुन्छ । त्यसैले यो तीजलाई जातीय रुपमा हेरिनु हुन्न ।
अव तीजमा एकल महिला वा विधवा नारीले मनाउनु हुन्न भन्ने परम्परा सिकाउनेहरुको जमातलाई अबको नयाँ पिंढीका दिदीबहिनीहरुले गतिलै जवाफ दिईरहेका छन् । एकल महिलाको चाहिँ चाहना र ईच्छा हुदैन र ?
बिमला आठपहरिया, गृहिणी–साहित्यकार
हामी नेपाली हौं नेपाल भित्र चलेको रीतिरिवाज चाडपर्व नै हाम्रो आफ्नो गहना हो, यसलाई सबैले एकरुपताको नजरले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । चाहे उधौली पर्व होस् चाहे उभौली, छठपर्व, देउडा, गौरा पर्व पनि दशैं तिहार जस्तै हो, यसलाई जातीय रुपमा हेरेर साम्प्रदायिक भावनाले हेरिनु हुन्न ।
अव एकल महिला अर्थात् विधवा नारीको चाहिँ मन होइन र ! उनीहरुले चाहिँ मुस्कुराउनु हुन्न, नाच्नुहुन्न भनेर कुनै ग्रन्थमा स्पष्ट लेखिएको छैन त, यदि लेखिएकै भएपनि त्यो लेख्ने पनि मान्छे नै हुन् । भगवानले नै लेखेर एकल महिलाले केही नगर्नु भनेका त छैनन् होला नी ? त्यसैले उनीहरुको पनी सहभागीतको आवश्यकता रहेको छ ।
दाेलखा समाचार बिचार दृष्टिकोण
धनुषाका स्थानीय तहमा ४ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु निस्केको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक
समाजसेवी सकुना श्रेष्ठको “माईतीको आगन” को बोलसँगै यसपालीको तिज पर्व समापन
६ आश्विन २०७८, बुधबार १४:३३ bampijhyala 0
भीमेश्वर नगरपालीका वडा नंं २ का ६२ बर्षिय तिर्थ बहादुर कुसुले नार्गाजुन स्थित मानव सेवा आश्रममा
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा नं....
५ आश्विन २०७८, मंगलवार २२:०४ bampijhyala 0
दोलखा जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या ३ हजार ४ सय ६०
अजय प्रधान,बाँपीझ्याला, दोलखा । दोलखामा पछिल्लो समय कोरोनाका नयाँ...
Covid -19 दाेलखा समाचार
५ आश्विन २०७८, मंगलवार ०८:४० bampijhyala 0
दोलखाको स्थानिय निकायमा भोली ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म कोभिड १९ भेरोसेलको पहिलो र दोस्रो मात्रा दिईने
अजय प्रधान,बाँपीझ्याला, दोलखा । दोलखा जिल्लामा भोली असोज ६...
सत्तारुढ गठबन्धनकाे बैठक बस्दै २४ भाद्र २०७८, बिहीबार १८:३०
१ हजार २ शय ५१ जना सङ्क्रमित थप, १ हजार ६ शय ३० जना निको २४ भाद्र २०७८, बिहीबार १८:३०
परराष्ट्रमन्त्री खड्काद्वारा पदभार ग्रहण २४ भाद्र २०७८, बिहीबार १८:३०
Saptari snakebite kills2kids २४ भाद्र २०७८, बिहीबार १८:३०
विराटनगर भन्सारले एक वर्षमा चालीस अर्ब राजस्व संकलन २४ भाद्र २०७८, बिहीबार १८:३०